ICarbon Fibre VS. I-fiberglass Tubing: Yikuphi Okungcono?
Uyawazi umehluko phakathi kwe-carbon fiber ne-fiberglass? Futhi uyazi ukuthi omunye ungcono yini kunomunye? I-fiberglass nakanjani indala kulezi zinto ezimbili. Idalwe ngokuncibilikisa ingilazi bese iyikhipha ngaphansi kwengcindezi ephezulu, bese ihlanganisa imicu evelayo yento ne ...
I-Carbon fiber ishintsha i-aluminium ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokufaka izicelo futhi ibilokhu yenza lokhu emashumini ambalwa edlule. Le micu yaziwa ngamandla ayo ahlukile nokuqina futhi futhi ayisindi ngokweqile. Imicu ye-Carbon fiber ihlanganiswe nezinhlaka ezahlukahlukene ukudala ama-compos ...
Isetshenziselwani amashubhu weCarbon Fibre?
Amashubhu we-Carbon fiber Izakhiwo ze-Tubular ziwusizo ezinhlelweni eziningi ezahlukahlukene. Ngakho-ke, akumele kusimangaze ukuthi izakhiwo ezihlukile zamashubhu e-carbon fiber zibabeka ekufuneni okukhulu ezimbonini eziningi. Ngokuvamile kulezi zinsuku, amashubhu e-carbon fiber angena esikhundleni sensimbi, i-titanium, noma ...
Amaphayoni weCarbon Fibre aphakanyiswe ngamanzi afanelekile ukuhlanza iwindi lanamuhla
I-washer ehlanza iwindi kanye ne-cleaner yanamuhla inobuchwepheshe obutholakalayo kubo obusasele iminyaka ngaphambi kobuchwepheshe kusukela eminyakeni eyishumi edlule. Ubuchwepheshe obusha sha busebenzisa i-carbon fiber ezigxotsheni eziphakelwa amanzi, futhi lokhu kwenze ukuthi umsebenzi wokuhlanza amawindi ungabi lula kepha uphephe kuphela. Amapoli we-Water Fed ...